म स्वर्ग जाने बाटो हुँ | ईश्वरमा सत्य जीवन Radio
छोरी, तिमीलाई सिकाइएका सबै कुरा आफूमा जीवीत राख, सुरु देखी नै मैले तिमीलाई यहि सिकाएको हुँ… जीवन दिने पवित्र आत्मा, उहाँले दिनु भएको उपहार प्रत्येकलाई र तिमीहरु प्रत्येकलाई उहाँको अनुग्रह दिईएको छ । तिमीहरु मध्ये केहि उहाँको अनुग्रहमा रहेका छौ । समय संगै उनीहरु म बाट टाढिए , परमेश्वरको जीवनबाट टाढिए र म बाट टाढा गएका छन् । जब उनीहरुले मेरो क्रुसको सामना गर्ने छन् मेरो कु्रस तिनीहरुबाट भएभीत हुनेछ । के मैले तिमीहरुलाई सिकाउको छैन र, कि मेरो क्रुस र म संगै छुट्याउन नसकिने गरि जोडिएको छु ।
यी सबै कुराको लागी मलाई आशीष देऊ …मेरो पाईलाहरु अनुसरण गर , पूर्ण रुपमा म संग एक होऊ, तिमीहरुको जीवनमा मलाई स्वागत गर । मलाई तिमीहरुको जीवनको हिस्सा हुन देऊ । मेरो हातहरु बन, मेरो पाईलाहरु बन, मेरो सम्पूर्ण शरिर बन ! तिमी मलाई सोध्नेछौ, कसरी ? तपाईको मतलब के हो ? र यो कसरी तपाई हुन सक्छ , एक दुखी, धुलो जस्तै, एउटा निर्धो प्राणी मेरो हाथ , खुट्टा र शरिर हुन सक्छ र ? कि न तिमीले बिसीए रहेका छौ कि तिमीले आफ्नो सबै अभिलासा मलाई दिएका छौ, ५ उसरी तिम्रो लागी मर्नुभयो , अब तिम्रो केहि बाकि छैन ३ ? यदि तिमी जो सबै भन्दा कमजोर र दयनिय छौ, उसलाई यति धैरै दिईएको छ भने, तिनीहरु जसले मलाई सधै धेरै प्रेम गर्छ उनीहरुलाई कति दिन्छु ? यदि तिमी सम्मानीत स्थान सम्म पुग्न चाहन्छौ भने ,म परमेश्वर , जो मेरो दिब्यतामा अविभाजी हुँ , भन्दैछु तिम्रो चाहाना मलाई देऊ र आफैलाई त्याग ताकी तिम्रो केहि बाँकी नरहोस् , केहि पनि ! तब महिमाको शक्तिले म तिमीलाई उठाउने छु । म तिमीलाई पूर्ण रुपमा धेरा लगाई सुरक्षा दिनेछु , ताकी तिमी मेरा अंश हुन सक । म तिमीलाई परिपक्क बनाउने छु ताकी जुन कुराहरु पापले भरिएको थियो त्यसलाई रुपान्तरण गरि मेरो ज्योतीमा प्रज्वलित गर्नेछ, ईश्वरीय पूर्ण महिमा, यसरी ने तिमी स्वर्गमा प्रवेश गर्नेछौ ।
के तिमीले कहिल्यै असिमित प्रेमको बारेमा सुनेका छौ ? ब्रहृाण्डको केन्द्रबाट एउटा प्रेम जसले किरण फैलाई अरु सम्पूर्ण ब्रहृाण्डमा बाँड्दै छ ? मेरो प्रेमले संसारको सबै सार पार गर्दछ , सम्पूर्ण संसारको एक उज्यालो प्रकाश हुँ । र तिम्रो हृदयबाट हरेक ठूलो चिन्तालाई पार गर्न सक्षम गर्दछ । मेरो प्रेमले तिम्रो आत्मालाई समेत्छ, तिम्रो दिमाग, तिम्रो बोद्धिकता, र यो स्वर्गबाटको बिहानको शित जस्तै गरि तिम्रो हृदयमा प्रवेश गर्दछ । तिम्रो शरिर र आत्मा प्रत्येकको प्रत्येक कमजोरीलाई स्वर्गीय शितको चमकीलो थोपाले उपचार गरी निको पार्नेछ । तिम्रो शरिर र आत्मा मेरो ज्योतीमा डुबाऊ, त्यसरी नै तिमीले दुर्गमतामा पनि ईश्वरत्व प्राप्त गर्नेछौ । अन्तमा म यो भन्दछु कि मेरो शृष्टि म तिम्रो दुलाहा हुँ । जस्तै मैले तिमीलाई बिगतमा बिस्तृत रुपमा यो भनेको छु ५। एक चोटी तिमीले मलाई अनुमति दियौ भने म तिम्रो हृदयमा प्रवेश गर्नेछु , अनी तिमी , र तिमी कुनै झन्झट बिना नै मेरो ज्वलन्त अंगालोमा आउनेछौ । मलाई थाहा छ कि तिमी मेरो ज्वलन्त अंगामलोमा आउनेछौ । म तिम्रो परमेश्वर, ले तिमीलाई मेरो ज्योतीमा राख्नेछु । तिमी मेरो प्रकाशमा समाहित हुनेछौ , आगोका प्रकाश जसले तिमीलाई जीवन दिनेछ । त्यो आगोका प्रकाश म नै हुँ । र जब तिमी मेरो जीवनमा प्रवेश गरिरहेको हुनेछौ , तिम्रो सम्पूर्ण अस्तित्व उज्यालो प्रकाशमा चम्कनेछ , निलमणी जस्तै चम्कनेछौ । रुपान्तरको यस समयमा तिम्रा सबै सदस्यहरु म मा लुप्ट हुनेछन् । तिमी झन बढि सुन्दर हुनेछ । म मेरा हाथ तिम्रो शिरमा राखेर आशिष दिनेछु र तिम्रा पाईलाहरले तिमलिाई अभिशेक प्राप्त गर्न मद्दत गर्नेछ ।
यदी म अब साहसी हुन सके भने, म तपाईलाई यो भन्न चाहन्छु : म तपाईको पबित्र मुहारको बारेमा बढी ध्यान दिन चाहन्छु , म तपाईलाई आमने सामने हेर्न चाहन्छु …
एकदिन अवश्य हुनेछ … धन्य हुन तिनीहरु, जसले अन्धकारमा पनि मलाई ज्योतीको रुपमा देख्छन् ,अझ बढि धन्य छन् तिनीहरु जसले मलाई देखेका छैनन् तर पनि बिश्वाश गर्दछन् । र धन्य हुन् तिनीहरु जोहरुले मलाई आफ्नो बिवाहको पोशाक जसै गरी लगाउन आमन्त्रित गर्दैछन् , तिनीहरुले प्रकाश देख्नेछन्, धन्य हुन् तिनीहरु जसले लगातार र अथक प्रयासका साथ मेरो क्रुष पछ्याई अँगालेका छन् , तिनीहरु स्वर्गको प्रकाशसंगै उचालिने छन् ।
मेरो दिब्य ज्योतीले सबै आत्मालाई एकजुट बनाउछ , सबै जीवित प्राणीहरलाई, यद्धपि केहिले म संग तुलना गर्दै अफैलाई अन्धकारमा लुकाए, तर मेरो ज्योती त्यो अन्धकार भन्दा धेरै शक्तिशाली छ , र यो ज्योती सबै भन्दा कुनाको कालो अन्धकारमा पनि छेद गर्न सक्छ , सबैभन्दा चम्किलो प्रकाशमा तिनीहरुलाई चम्काई निको पार्नेछ… जो बुद्धिद्धारा हेरिएर प्रबुद्ध बनाएको छ, उसले मेरो चाहनालाई बुझ्नेछ, उसको दिमाग, उसको बिचार, उसको आचरण, म सम्म पुग्नको लागी गरेको उसको प्रयत्न, उसले गरेका यस्ता कार्यहरुले मलाई महिमा प्रदान गर्दछ । तिनीहरले यो बुझ्नेछन् कि मेरो ज्योती बिना उनीहरुको हृदय केहि पनि होईन, जुन ज्योती म बाट दिईएको छ , दर्शनिकहरुको ज्ञान पनि असमर्थ र अपर्याप्त छ उच्चबाट आउने ज्ञान प्राप्त गर्न , म बाट आउने ज्ञान प्राप्त गर्न ।
२.मैले प्रभु येशूले ग्रिक भाषमा केहि भनीरहनु भएको सुने ः हरेक क्षण, मिनेत, घण्टा र सबै परिस्थितिमा मेरो प्रशंसा गर ।